Trump ayaa wacad ku maray in jawaab kun jeer ka culus ay ka bixin doonaan weerar walba oo… – Hagaag.com
Trump ayaa wacad ku maray in jawaab kun jeer ka culus ay ka bixin doonaan weerar walba oo…
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray in jawaab “1,000 jeer ka culus,” uu ka bixin doono weerar walba oo ka yimaada Iiraan.
Hadalka Trump ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Iiraan ay qorsheysay dilka Safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika, Lana Marks.
“Weerar walba oo ka yimaada Iiraan, noocuu doono ha noqdo, oo looga soo horjeedo Mareykanka waxaa looga jawaabi doonaa weerar lagu qaado Iiraan oo 1,000 jeer ka culus!” Trump ayaa shalay sidaas ku qoray bartiisa Twitter-ka.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan Saeed Khatibzadeh ayaa beeniyay warka qorshaha dilka ee uu weriyay Politico.
Waxaa la sheegay in Iiraan ay qorsheyneysay inay disho Safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika, oo muddo dheer saaxiib la ahayd Madaxweyne Trump, si ay uga aar goosato dilkii Jenaraal Qasem Soleimani uu Mareykanku u geystay bishii January.
Gen. Soleimani waxaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo diyaaradaha Mareykanku ka geysteen garoon ku yaalla Baghdad.